छडको मूल्य बढ्दो क्रममा – Kendra Khabar
२०७७, १९ फाल्गुन बुधबार ०९:३२
सिमेन्ट र छड उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि र खपत पनि सकारात्मक भएका बेला छडको मूल्य बढ्दो क्रममा रहेको छ । गत मङ्सिरमा प्रतिकेजी रू. १५ देखि रू. २० सम्म वृद्धि भएको फलामे छडको मूल्यमा हाल प्रतिकेजी रू.३ देखि रू. ४ सम्म बढेको हो ।
अर्काे मुख्य निर्माण सामग्री सिमेन्टको मूल्य भने यथावत् नै रहेको छ ।
विगत २ हप्तादेखि छडको मूल्यमा पुनः वृद्धि हुन थालेका छड उत्पादक तथा विक्रेताहरू बताउँछन् । छड उत्पादक कम्पनीहरूले मंगलवारमात्रै छडको औसत मूल्य भ्याटसहित प्रतिकेजी रू. ७४ मा विक्री गरेका छन् । यो मूल्य पुनः बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनका अनुसार ३ हप्ताअघि यसको मूल्य प्रतिकेजी रू. ७० सम्म झरेको थियो । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमै कच्चा पदार्थ बिलेटको मूल्य बढेकाले नेपाली बजारमा पनि यसको मूल्य दिनप्रतिदिन वृद्धि भएको हो ।
आयात गरिने बिलेटको मूल्य अझै केही प्रतिशतले वृद्धि हुने भएपछि नेपाली बजारमा पनि छडको मूल्य बढ्ने ती अधिकारीले बताए । यसअघि बिलेट किन्दा उनीहरूले प्रतिटन ५०५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्थ्याे ।
केही दिनकै अन्तरमा डलरको मूल्य पनि ११६ बाट मंगलवार ११७ दशमलव ९७ पुगेकाले पनि छडको मूल्यमा केही वृद्धि हुने देखिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणको सिजन भएकाले अहिले सिमेन्ट तथा फलामे छड उद्योगहरूले उत्पादन क्षमतालाई बढाइ ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । कोभिड–१९ का कारण अतिप्रभावित भएका निर्माण सामग्री उद्योगहरू अहिले मागसँगै खपत पनि सोहीअनुसार नै वृद्धि भइरहेको छ ।
यसअघि पूर्वाधार निर्माण सिजनको शुरुआतमै अधिकांश निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको थियो । त्यस बेला सिमेन्टबाहेक गिट्टीबालुवा र छडको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि निर्माण व्यवसायीहरू चिन्तित भएका थिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर निर्माण सामग्रीको मूल्य बढिरहे काम गर्नै नसकिने दाबीसमेत गरेको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय रूपमै छडको मूल्य बढिरहँदा नेपालमा मङ्सिरताका यसको फ्याक्ट्री मूल्य नै प्रतिकेजी रू.८० भन्दामाथि पुगेको थियो । तर, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण असोज तथा कात्तिक महीनामा यसको औसत मूल्य प्रतिकेजी रू. ६५ देखि रू. ७० सम्म झरेको थियो ।समाचार साभारः आर्थिक अभियान दैनिक